Na2O + NaNO3 → Na3MAYA4
sodium xabagta soodiyam amooniyam Soddon Orthonitrate
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Na2O + NaNO3 . Na3MAYA4
What is reaction condition of Na2O (sodium oxide) reacts with NaNO3 (sodium nitrate) ?
Heerkulka: 310 - 320 ° C
How reactions can happened and produce Na3NO4 (Sodium Orthonitrate) ?
Phenomenon after Na2O (sodium oxide) reacts with NaNO3 (sodium nitrate)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga Na3NO4 (Sodium Orthonitrate), oo soo muuqda dhamaadka falcelinta.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Na2O + NaNO3 . Na3MAYA4
Su'aalaha la xidhiidha alaabta Na3NO4 (Sodium Orthonitrate)
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Na3NO4 (sodium nitrate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Na3NO4 (Sodium Orthonitrate) badeecad ahaan?
sodium xabagta xabagta beryllium
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2Na2O + BeO → Na4BeO3
What is reaction condition of Na2O (sodium oxide) reacts with BeO (beryllium oxide) ?
How reactions can happened and produce Na4BeO3 () ?
Phenomenon after Na2O (sodium oxide) reacts with BeO (beryllium oxide)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga Na4BeO3, oo muuqda dhamaadka falcelinta.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2Na2O + BeO → Na4BeO3
Questions related to product Na4BeO3 ()
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Na4BeO3 (beryllium oxide)? What are the chemical reactions that have Na4BeO3 () as product?
sodium xabagta carbon dioxide kaarboon Sodium kaarboon
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Na2O + CO2 . Na2CO3
Waa maxay xaaladda falcelinta ee Na2O (sodium oxide) ee CO2 (kaarbon dioxide) kaga falcelisa?
Heerkulka: 450 - 550 ° C
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Na2CO3 (sodium carbonate)?
Dhacdada ka dib Na2O (sodium oxide) waxay la falgashaa CO2 (carbon dioxide)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Na2O + CO2 . Na2CO3
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Na2CO3 (kaarbon dioxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Na2CO3 (sodium carbonate) alaab ahaan?
Fe2O3 + 5Na2O → 2Na5Fool xun4
macdanta birta sodium xabagta Sodium Oxoferrate (III)
1 5 2 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Fe2O3 + 5Na2O → 2Na5Fool xun4
What is reaction condition of Fe2O3 (iron oxide) reacts with Na2O (sodium oxide) ?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Na5FeO4 (Sodium Oxoferrate(III))?
Phenomenon after Fe2O3 (iron oxide) reacts with Na2O (sodium oxide)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga Na5FeO4 (Sodium Oxoferrate (III)), oo ka muuqda dhamaadka jawaab celinta.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Fe2O3 + 5Na2O → 2Na5Fool xun4
Su'aalaha la xidhiidha alaabta Na5FeO4 (Sodium Oxoferrate(III))
What are the chemical and physical characteristic of Na5FeO4 (sodium oxide)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Na5FeO4 (Sodium Oxoferrate(III)) alaab ahaan?